Kedu ụdị uwe ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike ichebe gị pụọ na anyanwụ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Anyanwụ na-agba ịnyịnya ígwè - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Anyanwụ na-agba ịnyịnya ígwè - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu ụdị uwe ịgba ịnyịnya ígwè nwere ike ichebe gị pụọ na anyanwụ?
Ezigbo ọkọchịagba ịnyịnya ígwèbụ ihe dị mfejersey, nke na-eku ume ma na-enyeanyanwụ nchedo. Ihe eji eme ihe maka Cycologyjesiena knicks nwere UPFanyanwụ nchedoihe gbasara 50, ọkwa kachasị elu, ma gbochie 98% nke ụzarị UVA na UVB.
You maara onye ịgba ígwè maara ihe nke na-ekpuchi olu, aka na aka mgbe ọ na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ọzụzụ n'èzí? Iji mee okwu gbara ọkpụrụkpụ maka nchebe anyanwụ, m ga-egosipụta n'onwe m eziokwu dị njọ n'ihu igwefoto maka oge mbụ! Abụ m Debra Stefan, LCI-League Cycling Instructor of the League of American Bicyclists na gị Henderson Trail Watch Guide na usoro m Smart Cycling Guidelines na Omume Kasị Mma Must Ga-amata Ebe ị nụla ọtụtụ ihe n'ọnụ m, ị nwere ike ịghọta na m dị obere 'okenye okenye'. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi n'èzí dị ka m - nke afọ ọ bụla - mmebi anyanwụ bụ nnukwu ihe kpatara ikpuchi olu, ogwe aka, na aka gị. Anyị enwere ike ikwu okwu ?! Enwere ezigbo ihe kpatara ị ga - ahụ ka m yi mkpuchi maka olu, aka na aka.
Nke ahụ bụ n'ihi na afọ iri gara aga nke ụzarị ọkụ UV ewerela nsogbu ya ma achọrọ m ka ọ ghara ịka njọ. Ọ bụ ezie na e nwere ọgwụgwọ ndị magburu onwe ha iji mezie mmebi mbụ (na enwere m ụfọdụ) mgbochi bụ ihe ngwọta kachasị mma. Ugbu a bụ oge iji kwuo eziokwu: iji mee ka okwu dị egwu maka nchedo aka - na m na-ekwu maka nchedo anyanwụ na-egosi gị aka m.
Na nke mbụ ya na igwefoto, ekpughere m eziokwu ọjọọ banyere Debra Stefan ya na ndị ọ na-agwọghị Ọ bụrụ na ị ga-agwa onye ọ bụla afọ site na iji aka ha, atụnyere m nke ndị enyi m dị afọ iri itoolu. Ọ dịghị mma. Anyị agaba.
Were iku ume miri emi n'ihi na nke a nwere ike iwepụ ume gị. E nwere ya. Ugbu a ka m nwere anya gị, uwe nwere ike ịbụ ezigbo anwụ gị, ma kachasị mma.
Ya mere kpuchie ihe i nwere ike. Cheta itinye nkpuchi anwu n'ihu gị, ntị gị, olu gị na mkpịsị aka UV maka egbugbere ọnụ gị. Aga m agabiga oke omimi iji nye gị ihe nchebe atọ kachasị mnya igwe ga - enwerịrị maka ndị ịgba ịnyịnya igwe nwere ọgụgụ isi: 1.
Yiri okpu agha (lee edemede m gara aga maka ihe kpatara ya) 2. Yiri ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụ ugogbe anya (lee isiokwu m gara aga ọzọ) 3. Yiri uwe aka maka ihe karịrị naanị nchedo anyanwụ (ugbu a ị hụla aka m) leotards, olu gaiters, olu aka anyanwụ, na ihe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya bụ nhọrọ ma ọ bụrụ na i chere na ọ 'dị mma ịnwe' vs 'ga - enwe' akpụkpọ ahụ n'ihu Ichebe ụzarị ọkụ UV dị egwu, ma ndụ adịghị agbanwe agbanwe mgbe niile, dị ka isi trauma, enweghịzi ọhụụ ma ọ bụ mmerụ ahụ na aka.
Ugbu a bụ oge ịkọrọ ụfọdụ ihe ọmụma sayensị, ọmụmụ: Mmetụta nke anyanwụ na akara ngosi ahụike a na-ahụ anya nke ịka nká na akpụkpọ anụ Caucasian (ebe ọ bụ na akpụkpọ anụ bụ ọnọdụ kachasị njọ) Ihe ịrịba ama ndị a na-ahụ anya nke ịka nká bụ 80% UV -Ihe ngosi emetụta. N'ime oge ndụ, ọdịdị nke anụ ahụ na usoro na-agbanwe site na 20% oge na ndụ dị ka nri, ụtaba, ọrịa ma ọ bụ nrụgide. Nke ahụ na-enye ohere 80% nke ikpughe! Ee, anyị nwere ike ijikwa 80% nke ịka nká.
Ihe omume dị n’èzí bụ isi ihe na - ebi ndụ ọ bụla dị mma kwa ụbọchị na-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ahụike. (Lee edemede m na nke a) Kwadebe onwe gị tupu ị pụọ n'èzí. Chebe akpụkpọ gị site na ụzarị ọkụ UV nke na-emerụ ahụ, nke nwere ike ịkpata mmebi yana ọbụna bute ọrịa kansa.
Usoro ị na-eme tupu ịnya ịnyịnya kwesịrị ịgụnye mkpuchi anwụ na uwe na-echebe gị. Iji nweta ọtụtụ ahụ ike na ịgba ígwè n'èzí, ọ dị mkpa ime ka nchedo anyanwụ bụrụ omume kwa ụbọchị. Ugbu a ị kpuchie isi gị, anya gị, na aka gị, ọ ka dị gị n'aka iji ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ. Bido biking maka ahụ ike ma ọ bụ ibu ibu ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ịmalite, gwa m okwu.
Abụ m Debra Stefan, Onye Nkụzi Cygba Ọkụ League gị, onye na-enye ọzụzụ ahụike na ọkachamara maka ahụike dị mma karịa afọ 40. Ugbu a, m nwere ntị gị
Kedu uwe uwe kachasị mma nke anyanwụ?
Ndị a bụuwe kacha mma nke anyanwụụdị:
Kacha mman'ozuzu: LL Bean.
Kacha mmaikeegwuregwu ika: Athleta.
Kacha mmaegbuke egbuke-agba ika: Lilly Pulitzer.
Kacha mmaika maka igwu mmiri: Ala nke njedebe.
Kacha mmateknuzu ika maka mgbakwunye-nha: Columbia Egwuregwu.
26bọchị 26 2021
Yabụ ọ bụrụ na itinye otu ego ha na-eji na SPF ule, ọtụtụ mmadụ anaghị etinye nke ahụ ma ọ na-esiri m ike ị nweta oke nha na akpụkpọ ahụ na ihe ị hụrụ na akara ahụ bụ na ihe ị nwetara mgbe ị tinye akwa gị, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịgbanwe n'oge ndụ uwe gị, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa, ọkwa Upf maka uwe kpebisiri ike site na nyocha tozuru etozu, ndị ọkà mmụta sayensị na-atụle ole UV site na Substance na-abanye. A na-akpọ nke a nnyefe a na-eme nke a n’ejighị akpụkpọ mmadụ wee mee ya na ọ bụ in vitro ule na-akpata erythema ma ọ bụ ntachu nke na-akpata UV bụ ngwakọta nke UVb na obere UV light uva na uvbtransmittance iche iche wee jiri mgbakọ na mwepụ na ọgụgụ ole ka esi enweta uwe iji gbaa akpụkpọ gị ọkụ.
N'ozuzu, ị ga-enweta nchebe dị elu karịa site na uwe gị Upf karịa ọkwa Upf, n'ihi na Upf bụ ihe kachasị njọ ebe UV niile na-abata n'ime uwe gị site na ezigbo uwe bụ 3d, Ya mere, mgbe Ìhè na-abịa n'ụzọ dị otú a, naanị ibe a ga-eme ka umuv ahụ dị ozugbo, ebe akụkụ gị ndị ọzọ agaghị agabiga na ya ma yabụ ị ga-enweta ọtụtụ nchekwa, o doro anya na ọkwa Upf bụ naanị maka akpụkpọ ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eyi uwe uff na mkpịsị aka gị ekpughere ị gaghị enweta nchebe ọ bụla na mkpịsị aka gị, enwekwara ụkpụrụ n'ụdị ụdị uwe nwere ike ịnata ọkwa uff, yabụ n'ozuzu ha ga-ekpuchi akpụkpọ zuru oke na, dịka ọmụmaatụ, singlets na bikinis anaghi ekwe ka ha nweta akara ugo na ebe ufodu nwere oke na elu nke i nwere ike ikwu dika site na anwu anwu na Australia nke kachasi elu i nwere ike ikwu bu 50 gbakwunyere dika ya na spfso nwere akwa eji mara ya. nwere ike ịtụ anya na ọ bụghị ọtụtụ uwe n'ezie nwere ọkwa UPF, mana uwe nkịtị nwekwara ike ichebe akpụkpọ gị site na UV ọ naghị atụ ya ma anyị maara na, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị enwetala tan site na uwe n'oge ụfọdụ, ọ dị nwute na ọtụtụ na-enye ha Uwe akwa enweghi nchebe UV nke ukwuu, ya mere otu nnyocha chọpụtara na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke uwe na si Mgbe ị lere ya anya, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke uwe okpomọkụ bụ ihe na-erughị -15 upf erughị ọkara uwe ị lere anya at had more upf 30. O nwere ike isiri gị ezigbo ike iji tụnyere ákwà dị iche iche maka na ọ bụ ebe ahụ E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche ga-agbanwe agbanwe ole UV gafere, ọ bụ ya mere m ji chee na uwe a na-acha mma na-adị mma nke ukwuu n’ihi na ị maara n’ezie ọtụtụ nchedo UV ị na-enweta, yabụ m ga-ekwu maka ụfọdụ mgbanwe dị iche iche nke ị kwesịrị ileba anya na nke a, na n'ozuzu, ị chọrọ ịkwanye ọtụtụ igbe dịka o kwere mee ofdị ihe A na-eji akwa ahụ eme nnukwu ọdịiche, eriri eke, n'ozuzu ya, ọ bụghị ezigbo UV na-adọrọ adọrọ, yabụ ana m ekwu ihe dị ka owu -Viscose na linen N'otu nnyocha, owu na akwa ọcha niile ha nwalere nọ n'okpuru 5, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha na-ejikarị akwa akwa siri ike, nke a ga-enweta bụ ihe na-erughị 20. ajị ajị ajị anụ na silk dị mma karịa nke kacha mma bụ polyester polyester dị ezigbo mma na-adọrọ UVB n'ihi nhazi ya, o nwere mgbanaka benzene nke yiri ufodu sunscreens ma oburu yo ị yiri yiri fabtụle akwa ejiri nke polyester na owu, ya bụ, yiri akwa t Ha chọpụtara na polyester n'ozuzu ya ugboro atọ ruo anọ dị elu dị ka akwa owu.
Nsogbu bụ nnukwu bụ na polyester dị egwu na-eyi n'oge ọkọchị ka ọ na-agba ọsọsọ, ọ naghị eku ume, ọ bụ obere obere, mana ị nwere ike ijikọta polyester na ihe ndị ọzọ na nke a ga - eme ka ọ nwekwuo nkasi obi ma gbaa ume na UV nchebe na-diluted a bit, ma ọ bụ naanị a otutu ihe adaba na-eyi. Nke a na - eme, dịka ọmụmaatụ, na ọgbọ ọhụụ nke uwe egwuregwu. Site na ihe egwuregwu egwuregwu ọhụụ ị nwere ike ịnweta ọtụtụ obere akwa akwa na otu akwa ahụ yabụ ị ga-enweta Upf ka elu, yabụ dịka ọmụmaatụ ụfọdụ egwuregwu bọọlụ ọkachamara nwere karịa Upf 100.
Uwe ahụ esighi ike ma yabụ UV na-abanye obere pores na akwa site na obere oghere. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere akwa nwere oghere pere mpe ma ọ bụ pere mpe, ihe ọ bụla ị na-eji, nke a bụ ebe ị ga-enweta ọkwa dị elu nke nchebe UV. Yabụ enwere ọtụtụ ihe na - emetụta etu nnukwu oghere siri dị na ole ị nwetara, enwere ọkpụrụkpụ nke eriri nwere eriri siri ike ị ga - ejedebe na nchebe uvụ ka mma enwere ụzọ ị ga - esi jiri yarn gbagọrọ agbagọ. a ọzọ kọmpat ákwà mere ọzọ a elu UV nchebe mgbe ahụ nwekwara ndị na-ewu nke na-akpa ákwà nke mere na a na eri na-esichara n'ime a ákwà kpara akwa na obere gbatia agbasaghị ịdị mma karịa kpara akwa na-enweghị gbatia, ya mere ndị a na-eji ihe dị ka uwe elu azụmaahịa mgbe ahụ ị na-asachakwa ụfọdụ akwa na-agba ntakịrị na ịsa aka aka oghere ndị ahụ na-ejikwa owu na-aga ọtụtụ, mana ọ na-agbanwe agbanwe, yabụ n'ọmụmụ ụfọdụ ị chọpụtala n'ezie na ị ga-enweta okpukpu abụọ mgbe 5-10 washes na-enweta.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịsacha akwa uwe ntakịrị, ha ga-efunahụ eri wee dị gịrịgịrị ma nwekwaa ike karịa, eri ndị ahụ na-adịwanye njọ ma oghere ndị ahụ na-ebuwanye ibu, nke dị arọ ma sie ike na-enye gị nchebe karịa karịa nke oghere ma ị nwere ike nhụchasị anya site na akwa ahụ wee hụ ole ọkụ na-abanye n'ime akwa ahụ iji hụ etu nnukwu oghere dị na akwa denim ị nwere ike ịnweta Upf nke 1700 na ụdị akwa uwe na-acha odo odo. ihe dị ka ise na iteghete nwere ihe dịka sọks 15 denier ị ga - enweta upfof nke ihe na - erughi abụọ agba nke uwe ahụ na - ewetakwa nnukwu ọdịiche na nke a nwere ike ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ị matara ihe atumatu akwa dị ka ọ dị a otutu a sunscreen na nza nke benzene yiri mgbaaka ndị a benzene yiri mgbaaka bụ n'ezie e ji esiji ákwà na-eme dị ka e ji esiji ákwà ka benzene yiri mgbaaka na-eme ka ha ihe anya Ime ka ha banye ìhè, nke pụtara na ha na-egosipụta a dị iche iche na agba nke anya ìhè na nke ahụ bụ agba ị na-ahụ, mana eziokwu ahụ bụ na ha na-enwu ụfọdụ ìhè a na-ahụ anya pụtakwara na ha nwekwara ike ịmịkọrọ ọkụ UV, ọ bụ akwa ahụ ka ọ na-ebuwanye ibu, mmetụta a ka ukwuu, n'ihi na o doro anya na agba ahụ na-anọdụ na eri, ọ bụrụ na ị nwere a ọchapụ ákwà mgbe ahụ ị na-n'ezie na-ebibi ihe ọ bụla eke e ji esiji ákwà ndị dị na akwa na otú ahụ ka Upf gbadata ma ọ bụrụ na i nwere unpleached ákwà, na Upf bụ obere elu, ma ihe kasị mma i nwere ike ime bụ na-esi ike e ji esiji ákwà site dyeing akwa owu n'otu nnyocha, na-abawanye Upf ugboro atọ n'ọmụmụ ihe ọzọ site na ịhapụ akwa ahụ na-acha anụnụ anụnụ Bilie ya ugboro ise ma dọọ ya edo edo, mee ya okpukpu abụọ, ịcha ya na-acha anụnụ anụnụ dị mma karịa iji ọgwụgwọ UV pụrụ iche na akwa ahụ. Nsogbu dị n’ọtụtụ n’ime ọmụmụ ihe ndị a bụ na otu agba mere ka Upf bawanye ụba dị iche iche ihe kachasị mkpa dị ka ihe gbasara ogo agba ahụ, yabụ ego ole ị bara na akwa ahụ, agbanyeghị ụcha ọ bụ n’ozuzu ya. agba ọchịchịrị na-arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ọmụmụ, yabụ ihe dị ka oji na acha anụnụ anụnụ, mana n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ agba ndị ọzọ rụkwara ọrụ nke ọma, yabụ, dịka ihe dị ka uhie na beige ọzọ, ọ bụrụ na ị yikwasị uwe ọzọ, nke a nwere ike gbanwee dị ka agba na-amalite ịjụ oyi ma ya mere obere agba pụtara obere nchekwa n'ozuzu ya ụdị akwa ị na-achọ ụdị akwa ị na-eji, eg
B. Uwe elu uwe T-uwe elu Ejiji egwuregwu na uwe n'ozuzu, uwe elu azụmahịa adịghị mma nke ukwuu na nke ahụ bụ n'ihi agba ha na-abanye na eziokwu ahụ bụ na ha na-akpa na mkpa polyester ngwakọta dị mma karịsịa, ọkachasị mgbe ha nọ ugbu a agba agba agba Agba dị na mgbakwunye na ụdị akwa ị na-eji. E nwere ihe ole na ole ndị ọzọ na-agbanwe uru Upf.
Nke mbu, enwere ọgwụgwọ UV, yabụ ọ dị ka itinye anwụ na-acha na uwe gị, dị ka mkpuchi anwụ, ọ nwere ike ịbụ na kemịkal na ụdị anụ ahụ, ọ nwere ike ime n'oge emebe akwa ahụ. Yabụ ọ bụrụ na onye nrụpụta ahụ na-eji polyester aga, dịka ọmụmaatụ, wee mee ngwakọta polyester, ha tinye ụfọdụ sunscreen ahụ sitere na polyester agbakwunyere zinc titanium na ọbụna nano diamond, enwekwara ọgwụgwọ ị nwere ike itinye na uwe gị mgbe ịzụrụ ha , dị ka nke ahụ bụ na a na-akpọkarị ihe a na-akpọ rit sun guardthis nwere sunscreen pụrụ iche a na-akpọ TinosorbFD ma mgbe ị sachara otu ị ga - ejedebe uwe ruo afọ 30 nke nwere ike ịdịru 20. Nke a na - arụ ọrụ nke ọma na akwa ndị dị ka akwa ga - agbatị kwa ya, yabụ mgbe ị na - eche nha oghere ndị dị na akwa gị ka ị na - agbatị ya, nnukwu oghere ga - adị na obere nke ole nchekwa UV ga - abụ tufuo site na ịgbatị ya dabere na ụdị akwa ahụ, ya bụ, ọkpụrụkpụ nke akwa ahụ, otu esi agbatị ya, mana n'ozuzu, ị na-efunahụ ọtụtụ nchebe UV na-agbatịghị oke, dịka ma ọ bụrụ na ị nwere owu dịka ọmụmaatụ-gbue ngwakọta lycra site na 15, ị ga-atụfu ọkara nke nchedo Upf, ọ bụrụ na ị gbatịa ngwa ahịa gị site na pesenti iri atọ uf ​​na-agakwa na nke itoolu na nke ahụ abụghị nke ukwuu ya mere ọ dị ka ọ dị n'ozuzu maka nchebe Sun: jiri akwa dabara adaba, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-agbatị agbatị.
Also na-achọkarị inweta nchedo Upf mgbe ị na-eyi uwe mgbochi mmiri, nke ị nwere ike ịnwe. Aghọtala m ya ma ọ bụrụ na ị hụla na a na-ahụ ihe uwe mgbe mmiri dị. Nsogbu bụ na nchedo UV nwere ike ịla n'iyi ọbụlagodi mgbe uwe dị mmiri mmiri ma ọ gaghị ekwe omume ịkọ usoro ọ na-aga n'ozuzu ya, uwe akwa na-eme ka nchebe UV belata mgbe ọ dị mmiri, na-eme T-shirt akọrọ nwere tonines ise.
T-shirt nwere mmiri nwere ụzọ atọ ma ọ bụ anọ na ise, mana ọzọ karịa nke ahụ, ị ​​nweghị ike ịgwa ma ọ bụrụ na ị na-achọ akwa nchekwa UV ihe ịchọrọ bụ akwa sịntetik, akwa ndị ejiri akwa kpuchie na obere oghere, ịchọrọ ọchịchịrị, agba agba siri ike na ịchọrọ ka ha kpuchie ahụ gị dị ka o kwere mee, nke dị mwute na ọ pụtakwara na ọ ga-abụ na ọ gaghị adị mma nke ukwuu iyi ma ọ bụrụ na ị nọ n'anyanwụ ma na-arụsi ọrụ ike. Echere m na nke ahụ bụ nnukwu uru dị elu- ọnụahịa uwe. Nwere ike nweta ihe dị ka teknụzụ pụrụ iche na eriri, ma ọ bụ tinye ha na eriri, yabụ ị nwere ike ịchọta uwe dị mma nke ga-enye gị ọkwa UV-Pr, nke pụtara na ị nwekwara ike belata oge ọ ga-ewe iji tinyeghachi sunscreen ma ọ bụghị 'echegbula onwe gị banyere mkpuchi anwụ na-etinye aka na mpaghara siri ike iru.
Lee ụfọdụ ụdị uwe Upf m gbalịrị n'ezie. Nke a bụ hoodie si na uniqlo uv nso nke nwere nnukwu uv nchebe nke ọma 50 ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mma ma dịkwa jụụ, jiri ụfọdụ teknụzụ ikuku gị mee ka ọ bụrụ ikuku ikuku na akpụkpọ ahụ iji mee nke a. agbakwunyela ihe nzacha pụrụ iche na eriri ndị na-egbochi ma gosipụta nsogbu a na uniqlo bụ na e nwere naanị ihe dị ka uwe anọ Upf gosipụtara na ya nwere oke oke, ọ bụ ezie na ọ dị ka agba ọ bụla, ọ dịkwa ọnụ ala, yabụ echere m na nke a hoodie ruru ihe dị ka dollar iri atọ, ọ dị ịtụnanya na ọ naghị adaba na ekwenti gị nke ọma, ịnwere ike ịzọpịa ya ebe ahụ ọ na-adị mma nke ukwuu, nke m chere na ọ dị mma n'ihi na ị nwere ike ịda. Enwekwara isi mkpịsị aka aka na aka uwe, nke a na-ahụkarị na uwe dị elu.
Nke ahụ pụtara na ọ na-echebe azụ aka ahụ ntakịrị. Nsogbu dị na nke a bụ na ọtụtụ n'ime ya enweghị njide na nke a bụ n'ezie hoodie m na-eyiri isi mkpịsị aka m na mkpịsị aka ukwu mgbe m nyefere ekwentị m ma gbawaa ihuenyo maka oge izizi n'ime otu afọ na ọkara, n'ihi ya, m kpọrọ ya asị dị ka nke a hoodie, mana ọ na-echebe ya n'ezie. Enwekwara m uwe a na-acha ọkụ ọkụ site na Meccacosmetica rash vests - mgbe m na-eche maka uwe ọkụ ọkụ m na-eche banyere ndị ahụ na-enweghị atụ, atụmatụ dị egwu site na 90s ka ha wee dị ka fluorine, ha nwere obere weird bandana, ha nwere ụdị egwu dị egwu na ee , mara mma nke ukwuu n’oge m gbara afọ iri abụọ na abụọ m ziri ezi, ọ dịghị nke ọ bụla, m na-eyi ndị na-egwu mmiri dị jụụ, mana enweela ọtụtụ uwe mwụda mara mma nke pụtara n’afọ ole na ole gara aga.
Amaghị m ihe kpatara eji akpọ ha uwe ọkụ ma ọ bụrụ na ha abụghị akwa uwe ma ọlị, yabụ ha na-enwekarị opekata mpe ihe dịka alf dị ka obere aka aka ya na nke a na ọtụtụ ndị ọzọ, ha nwere ogologo aka ogologo, ọkụ ọkụ dị ka m chere ma ọ bụrụ na ị bụ onye dị jụụ na-efe efe, um, ị gaghị enweta ọtụtụ sọfụfụ ahụ n'ihu igbe gị mgbe ị na-eyiri otu n'ime ndị a ọzọ, nke a bụ Upf 50 ma ọ dị ka stretchy naịlọn spandex nke mere na ihe ọkụ ọkụ vests mgbe Igwu na ị gaghị echegbu onwe nke ukwuu banyere sunscreen na-abịa n'ime mmiri na ị dị nnọọ ga-reapply jidesie a ọtụtụ ihe ebe ebe na N'ezie akụkụ kasị njọ na-agbalị itinye sunscreen n'azụ gị ma n'ezie nke a ga-ekpuchi ya azụ gị mgbe m kwuru okwu banyere uwe nchedo ọtụtụ ndị na-eso ụzọ m tụrụ aro Solbari na m na-eyi uwe Asolbari ugbu a ha t Solbari zitere m ụfọdụ uwe m lere anya mgbe m jụrụ ha banyere teknụzụ ha jiri mee uwe ha mecca, zigakwara m bụ uwe mkpuchi maka ihe ọzọ, yabụ ihe na-amasị m banyere Solbari bụ na ebe ahụ ha nwere ụdị ejiji dị mma nke na-adị ka uwe nkịtị, ụfọdụ n'ime uwe ha nwere ike bụrụ ihe ọzọ, ọ dabere na ihe ị na-eyi nke ọma , ọ bụ ezie na ugbu a echere m na ihe nkpuchi nwere ike ịnakwere nke ọma karịa ma uwe Solbari yana akwa ndị ha na-eji nchekwa UV eme ihe n'ezie. Ha nwekwara ụdị akụkụ nke uwe ha nke na-echebe gị pụọ n'anyanwụ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ uwe ha nwere oghere isi mkpịsị aka ndị a, nke pụtara na ị nwere ike ịkwa ha uwe ahụ ma ọ ga - echebe gị azụ. Ọtụtụ n'ime uwe ha ga-anọdụkwa n'olu gị nke ọma ma ọ bụ ha nwere ike ịgafe olu gị na na-enye gị nchebe n'olu n'ihi na nke a bụ ebe a na-ahụkarị ọkụ na-agba ọkụ Solbari nwere ọtụtụ akwa dị iche iche na teknụzụ dị iche iche n'ime ha, yabụ ụfọdụ n'ime ha nwere ike iku ume ụfọdụ n'ime ha bụ mmiri mmiri na-achọ ụfọdụ n'ime ha dị jụụ na enwekwara ụfọdụ ndị bụ isi na-eguzogide isi, enwere otu Mmetụta dị nro nke dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị nwere anụ ahụ nwere mmetụta dị nro nke na-emetụtakwa anwụNke a bụ ngwakọta nke owu na ahịhịa na achara ma ọ nwere mmetụta dị oke mma, mana ha na-ajụkwa oyi nke ọma ị gaghị enweta mgbakasị ọ bụla site na okpomọkụ.
Ha anaghị eji ihe mgbakwunye kemịkalụ na akwa ha ọ bụla dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere nnabata kemịkal. Enwekwara akwa anyanwụ na-ajụ oyi nke na-adị mma nke ukwuu ma ọbụlagodi na ịnwere ihe dịka agba gbara ọchịchịrị nke na-amịkọrọ UV nke ọma, ị ka anaghị ekpo ọkụ nke ọma na anyanwụ Achọrọ m aka uwe ndị a nke ukwuu, yabụ aka uwe ndị ahụ nwere mkpịsị aka gbagoo elu aka gị ma ị nwere ike iyi ha n'okpuru uwe ọ bụla iji nye ogwe aka gị obere nchebe, nke dị ezigbo mma mgbe ị na-anya ụgbọ ala, n'ezie ị nwekwara ike iyi uwe ọkwọ ụgbọ ala. e nwere ihe ọzọ ika akpọ coolibar na a ọtụtụ ndị na-atụ aro ndị a nwere n'ezie elu uv nchebe otú m nwere olileanya na ị na-amasị isiokwu a.
M mara mma ọhụrụ ka Upf uwe. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ndụmọdụ ndị ọzọ ga-ahapụ m na nkwupụta ahụ, ị ​​nwere ike ịmasị isiokwu a kwa, denye aha na ọwa m, ị nwere ike ịgbaso m na Instagram wee lelee blog m maka sayensị mara mma karịa ruo oge ọzọ iji mụtakwuo
Uwe nchebe UV ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Gịuweọ bụghị naanị na ọ dị oke mma. Ọ na-amịkọrọ ma ọ bụ na-ebibi ihe na-emerụ ahụUVradieshon ma bụrụ otu n'ime ihe kachasịirèụdị nkenchedoimegideanyanwụmmebi na ọrịa kansa. Ihe bụ ihe ọzọ,anyanwụ-uwe nchebebụzọ kachasị mfe iji nọrọ na nchekwa; n'adịghịihe anwu anwu, ọ dịghị mkpa ka ị rụgharịa ọzọ!
Kedu ka m ga-esi gbochie anwụ na-acha mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè?
Yiri ugogbe anya maka anwụ na mkpuchi UV, ọbụlagodi na ha ezighi eziịgba ígwèndị - anya gị nwekwara ike ire ọkụ. Kpuchie apata na azụ aka gị n'ụba na ude anyanwụ ka ha na-ekpughere ụzarị UV mgbe niile. Yiri uwe ogologo ma ọ bụrụ na ị dịịgba ígwèruo ogologo oge ma chọọ uwe nwere ọkwa UV dị elu.Ọnwa Isii 26. Ọkt 2018
You nwere ike ịsị na ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ bụ akụkụ nke ịgba ịnyịnya ígwè ma echere m na ha bụ, mana ihe anyị nwere ike ime bụ igbu oge nke ike ọgwụgwụ ma zere ụfọdụ aghụghọ na ndụmọdụ ka ị wee nwee ike ịga ogologo na ngwa ngwa, ugbu a nke a bụ nke m ọkacha mmasị na anaghị eme. t ọbụna na-emetụta a igwe kwụ otu ebe Ọ bụ ihe banyere nke a ma na na na oh otú i nwere ike na-aga na-ehi ụra n'otu oge ahụ crouch, Echere m na m ga-ahụ gị mma n'isiokwu na-esonụ ọ dịghị ga-ama esịn, ka na-amalite na ihe doro anya N'ihi na ugbu a ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-elekwasị anya na ọzụzụ ha. Ebe ọ bụ na akụkụ kachasị mkpa nke izu ike bụ idozi na iwughachi akwara, ịkwesịrị izu ike iji nwekwuo ike ma sie ike. Ya mere, jide n'aka ma ị na-amalite ịmalite mgbatị ahụ ma ọ bụ na ị bụ onye nkuzi raara onwe ya nye nke ị na-ahazi n'ime ụbọchị ezumike gị.
Ihe ọzọ bụ na ị na-ege ahụ gị ntị, ịmara na ọ bụrụ na ị teta n'ụra, ị ga-ewepụ onwe gị ụbọchị ezumike adịghị mkpa ịkwanye onwe gị, ọ ga-abara gị uru ọzụzụ mgbe ị zuru ike mee ka akwara ndị a rụzie ma wughachi ya taa bụ otu n'ime ụbọchị izu ike ahụ enwere m ike izu ike ma nụ ụtọ ụda nke nnụnụ ebe a site na GCM anyị na-eji Whoops ya mere na ọ dị mma na dan Jerry ha niile maara izu ike m 'Aga m abụ ya ee tinye ụkwụ gị elu, zuo ike na don 'obi amamikpe oh ee, ka ino na ya, gini kpatara na i jupu site na GCN bank isiokwu gi a choro m tv iji kpoo ha oku bu uzo bara uru iji kwadebe aru gi ma luso agha agha ike ọgwụgwụ ọ ga-ewe nkeji iri were ezigbo mfe ihe niile ị ga - eme bụ pedal abụghị ọtụtụ watts na ụdị izu ike ahụ, mana ikpo ọkụ dịkwa oke irè n'ịzụlite ahụ gị na metabolism cylinders mgbe ịmalitere na-eme ihe dị mma Get na-eme ihe na-eme yoga ma ọ bụ ọbụna stre tching ga - enyere gị aka ịlụ ọgụ nke ike ọgwụgwụ a, ugbu a, enwere m kọfị ụtụtụ maka obere yoga, otu yogis abụọ nwere mwute nọ ebe ahụ mana m na - eme ihe ahụ Mee ọ rụọ ọrụ, ma lelee nke a, oh ọ bụ dị ka iberibe ityoga na mmiri ndị a dị ezigbo mkpa. M na-a drinkụ ihe ọ aụ aboutụ banyere kalama otu awa tupu mgbatị ahụ mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè. M na-agbakarị mgbe ị na-arapara na otu karama ma na-a likeụkarị ihe dị ka nke a, na-anwa ime ka karama ahụ gụchaa. Oge awa a kwesịkwara icheta, ka ọsụsọ na-agba gị, ka ị na-aghọ onye a Salts na mineral ndị a.
Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa ka ị maliteghachi ha, yabụ hydration gị bụ ebe a ka ihe ọ theseụ electroụ ndị a na-akpọ electrolyte na-adị oke mma ka ị nwee ike nweta nke a n'ụdị atab ma ọ bụ n'ụdị ntụ dị mfe iji, tụba na karama ahụ, ịkwanye, na ị dị mma iji nke ọma Kwadebe karama m maka ịnyịnya dị nnọọ ka prog. Renwe anụ ebule na ebule dịkwa ezigbo mkpa iji nọgide na-arụ ọrụ ike. Cheta, dị ka mgbe ị tinyere mmanụ ụgbọ ala ma ọ bụ mmanụ ụgbọ ala n'ime ụgbọ ala gị, ebe ụgbọ ala gị agaghị agba ọsọ, mgbe ọ na-abaghị uru na ahụ gị yiri nke ahụ nke mere na ọ ga-ekwe omume ịdebe nri na mmanụ ị na-ede ngwa ngwa na n'ihi na ogologo oge dị ezigbo mkpa kwa, rie nri nke ukwuu tupu gị agba ịnyịnya dị ka anyị ma ị ga-enwe ume ume ngwu ma ị ga-enwekwa ọgbụgba na-adịchaghị mma n'ihi ya nye onwe gị otu awa ma ọ bụ abụọ tupu anyị aga ịnyịnya rie onwe gị ezigbo nri ma hapụ ka sistemu nri gị na - arụ ọrụ nke ọma ogologo oge ị ga - ebugharị karịa nri ị ga - ewere iji jide n'aka na ị kwakọtara ezigbo nri m ga - ekwu otu ihe m ga - ekwu bụ na ị ga - eme ngwa ngwa.
Emela onwe gị atụmatụ ndị a sara mbara. Great Roo na-agabiga oke ike n'oge na-adịghị anya n'ihi na ihe ị ga - eme bụ mgba mgba ịla n'ụlọ, wee rụọ ọrụ gị ruo ogologo ụgbọ ịnyịnya ahụ ma gaa nke ọma ma dịkwa mfe ma kwụsie ike ma gbaa mbọ hụ na anyị na - eji ihe dịka kọmputa igwe kwụ otu ebe a ma ọ bụ igwe eji igwe igwe iji chọpụta ụzọ njem njem na ọsọ ị na-aga ịgba. Nke a bara ezigbo uru mgbe ị nọ n'ụzọ na-amata oge ole ị ga-aga n'ụzọ ahụ ka ị wee ghara ịdị ike n'oge na-adịghị anya Iji usoro nyocha obi gị bụkwa ụzọ dị mma iji jikwaa ike gị ka ị wee nwere ike iji mpaghara obi ndị a hụ ihe ị ga-eme na mgbatị ahụ.
Gbalịsie ike ka m tinye nke ahụ na m dị mma maka oge izu bụ ụzọ ọzọ dị mma iji hụ na ị na-apụ apụ na-acha uhie uhie na ijikwa ike ọgwụgwụ gị atụla egwu, gee ntị n'ahụ gị na mgbe Ọ bụrụ na ị nwere mmetụta ike gwụrụ na-agba ịnyịnya wee were ezumike, nọdụ ala, zuru ike site na iku ume, otu ọzọ wee nwee ike ịme ihe niile ọzọ, were obere oge nkeji ise ma ọ masịrị m iso otu enyi m ma ọ bụ otu ihu igwe nwee nnukwu ihe banyere ịgba ịnyịnya bụ na ọ bụ egwuregwu dị mma ị nwere ike ịnụ ụtọ oge ị na-emega ahụ ma ọ dịkwa mma n'ihi na ọ na-adọpụ gị uche n'ọrụ ị na-etinye onwe gị. Echere m, alaghachila m n'ụlọ njem otu ndị otu nnukwu otu wee hụ ebe m '' Ọ bụ n'ihi na m na-etinye aka na mkparịta ụka m na-ekwu, ọ dị ntakịrị ihe iju anya n'ihi na m bụ, 'Naanị m na m na-agwa gị ka gị na ndị enyi gị gaa ma ọ bụ soro ndị otu na-eme egwuregwu mana n'eziokwu enwere m gị m site na igwefoto ma m nwekwara onye okike ihe okike ihe nkiri mara mma m maka unu ma mechaa họrọ oge dị mma ịkwọ ụgbọala h ụfọdụ ndị hụrụ ụtụtụ n'anya, ọ na-agụ ha agụụ, ha na-anụ nnụnụ ahụ na anyanwụ na-abịa ma ha bụ nnukwu ihe mkpali, ọ dị mma, ndị ọzọ dị ka mgbede ebe ha na-eche na ha nwere ụbọchị dị mma ma ọ na-amasị ha ikiri ka anyanwụ dara. ijide n'aka na ị ga-ebuli ike ahụ dum, dị ezigbo mkpa, mana ihe m ga-ekwu bụ ịjụ abalị mgbe ahụ gị dị njikere ịrahụ ụra na ike gị ga-adị ala ọ gwụla ma ị dị ka m ma were ụfọdụ ezigbo nsogbu nzuzu n'abalị m ga - edebe - n'ụtụtụ ma ọ bụ n'isi mgbede, ma ọ bụrụ na m bụ ugbu a ị ga - enwe ezigbo usoro ma gbalịa itinye ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a n'ọrụ ma ugbu a enwere m olileanya na ọ ga - enyere gị aka Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a ma ọ nyere aka, gbaa mbọ hụ na ị nyere m mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na agbaghara m ihe Youthink kwesịrị ịdị na ndepụta a, biko mee ka m mara, ee ị maara na ngalaba nkọwa a dị n’okpuru ma eche m, nke ọma, lee gi n'isiokwu na-esonụ, m na-ekwu ka o si dị mma nke a gbara, lee m anya? You nwere ike ịhapụ ị dị njikere yep yep ee ee ntakịrị ihe na-eme n'ezie ga-ahapụ nke ahụ maka oge ọzọ, nke ziri ezi Ciao Bella oh ugbu a, isiokwu ndị ahụ emechaala ọ bụ ma ọ bụ ugbu a maka ụlọ tagzi m nna m na-ele papa papa papa anya.
You na-eyi okpu ịnyịnya ígwè n'okpuru okpu agha?
Onye na-agba ịnyịnya ígwènwere ike eyin'okpuru okpu agha, ma ọ dịghị mgbe ọ na-agaghị agba ịnyịnya, n'agbanyeghị agbanye ụkwụgịcheegịlee anya. Naanị oge ọ ga-anabata yaeyi okpu-ịnyịnyabụ mgbe itinye aka na yaịgba ígwèihe omume na mgbe ejiri yaịgba ígwèkit.Eprel 27 2012
Kedu ka m ga-esi chebe isi m n’anyanwụ?
Easiestzọ kachasị mfechebenke giisibu ikpuchi ya ihe di iche. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, kpoo okpu sara mbara nke na-echebe olu gị, yana. Okpu okpu abachaghi uru karia sunscreen (nke dika SPF 5), mana o na echebe giahịa ala isina ebe ndi ozo anwu anwu anwu.
Chọrọ uwe UPF n'ezie?
Ọ bụrụgị're just hiking, mgbe niile denimuwe elunwere ike inye ọtụtụ nchebe anyanwụ, mana nchebe nke akwa na-adị mgbe niile nwere ike belata nke ukwuu mgbeha'Reet wet, kwuru Brittany Buhalog, MD, ọkà mmụta akpụkpọ anụ na Madison, WI. Yabụ ọ bụrụgị'm ga-anọ na mmiri,gị'Llchọrọitinye ego naUwe UPF, ọ na-ekwu.Sep 20 2019
Ndi UPF na-asa akwa?
.B.UPFakara nke 50, ọkwa kachasị elu enwere ike ịnweta, naanị na-ekwe ka pasent 2 nke radieshon ultraviolet dị iji banye auwe. kinddị nchedo a anaghịsaa mmiri, ma dị ka ọ dị n’okpute ndị pụrụ iche e ji akpa ákwà, akwara ákwà pụrụ ịghọ nke gbagọrọ agbagọ ka oge na-aga, na-eme ka ha ghara ịdị irè n’ịchọpụta ìhè UV.04/19/2012
Nwere ike UV gafere akwa?
Mgbe ịnọ n’anwụ, iyiuweiji kpuchie akpụkpọ gị.Uwenye ọkwa dị iche iche nkeUVnchedo. Ọ bụrụ na ịnwere ikelee ìhèsite naakwa,UVụzarịnwere ike gafere, kwa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ugbu auwenke ahụ dị fechaa, dị mma, ma na-echebe megideUVụzarị ọbụna mgbe mmiri dị.23.07.2019
Kedu ka ọkụ si ekpo oke ọkụ maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Yabụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị na ndò bụ 32-40 Celsius C (90-105 Celsius) ọ na-abụkarị maka onye na-agba ịnyịnya ihu ihu ikuku nke 50 ° C (120 Celsius F) na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ikuku dị n'elu okporo ụzọ na-adị kana-agba ịnyịnyana draya ntutu, ọ bụ naanị mmalite nkendị na-agba ígwènsogbu naokpomọkụ.Jenụwarị 16 2014
Olee oke ọkụ na-ekpo oke oke ọkụ ịgba igwe n’èzí?
90 buna-ekpo ọkụ, karịsịa ma ọ bụrụ na iru mmiri. Maka ntụrụndụịgba ígwè, dị ka ndị ọzọ kwuru, na-eme atụmatụ ọtụtụ hydration ma na-eche na ị dị ọbụna n'ụdị kwesịrị ekwesị ekwesịghị ịbụ nsogbu.
Kedu uwe uwe ịgba ịnyịnya kacha mma maka nchebe anyanwụ?
Lee ya na Amazon. Boure bụ uwe e ji ama akwa site na ugwu igwe kwụ otu ebe Ned Overend. Boure na-enye akwa dum nke akwa ịnyịnya na-agba ịnyịnya anwụ, yana ndị na-eme ka ogwe aka dị jụụ, ndị na-agba ụkwụ na ọbụna ikpere oyi ma ọ bụrụ na ịchọghị ka ha gbadata n'ihi na ị na-eyi sọks zuru oke. Kwuru na ọkwa UPF 50 +.
Clothing nwere uwe na-echebe anyanwụ maka ụmụ nwoke?
Nabata na SunSibility - Ọkachamara na UV Sun Nchedo maka Womenmụ nwanyị, Menmụaka na Childrenmụaka. Obi dị m ụtọ na ịchọtala anyị na maka ndị na-alọghachi ọ dị mma ịnweghachi gị collection Nchịkọta Uwe Nchekwa UV anyị na-enweta na 28 Fabulous agba maka 2021.
Kedu ihe UPF pụtara na uwe elu igwe?
O yiri ka uwe ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'ime afọ ole na ole gara aga na-egosipụtakarị nchebe anyanwụ dịka ihe eji arụ ọrụ, ọkachasị na ngwa 'ihu igwe ọkụ'. Ultraviolet Protection Factor, ma ọ bụ UPF, na-egosi pasent ma ọ bụ obere nke ụzarị ọkụ UV nwere ike ịbanye n'ime akwa ahụ. UPF na-agbada n'ọtụtụ ihe: Ugboro ole ka uwe gị.